वर्षान्तमा मनपरी खर्च, एकै दिनमा ६ अर्ब ! spacekhabar
वर्षान्तमा मनपरी खर्च, एकै दिनमा ६ अर्ब !
चालू आर्थिक वर्षको पछिल्लो १५ दिन (असार १५) देखि मुलुकभरका सरकारी कार्यालयले चालू बजेटमा विनियोजित पूरै रकम रित्याउने गरी खर्च गर्न सुरु गरेका छन्। विगत वर्षहरुमा जस्तै यो वर्ष पनि कार्यालय प्रमुख, लेखा, स्टोर, प्रशासन र प्राविधिक कर्मचारीबीचको मिलेमतोमा चालू बजेटमा विनियोजित अर्बौं रुपैयाँ दोहन गर्न सुरु गरिएको हो। आइतबार (असार २२) मा एकै दिन ६ अर्ब ९ करोड रुपैयाँ चालू खर्चअन्तर्गत भुक्तानी दिइएको छ।
मुलुकमा पुँजीगत बजेट वर्षको अन्त्यमा धेरै खर्च हुने प्रणाली बसालिए पनि चालू खर्चका हकमा यस्तो हुनुनपर्ने हो। चालू खर्च वर्षका प्रत्येक महिनामा करिब बराबरका हिसाबले हुनुपर्छ। दसैंखर्च (असोज वा कात्तिक) र कर्मचारीलाई पोसाक भत्ता दिइने चैतमा केही खर्च बढे पनि अन्य महिनाको ठूलो फरक आउनुको औचित्य देखिँदैन। त्यसैले वर्षको अन्त्यमा बजेट बाँकी रहेपछि कर्मचारीको मिलोमतोमा विनियोजित रकम पूरै रित्याउने नियतले खर्च गरिएको हो। नागरिक दैनिकमा खबर छ।
प्रकाशित मिति: मंगलबार, असार २४, २०७६, ०७:४२:००